कतै शरीरमा पानीको मात्रा पुगेन ? देखिन्छन यस्ता लक्षण थाहा पाउनुस् « Khabar24Nepal
कतै शरीरमा पानीको मात्रा पुगेन ? देखिन्छन यस्ता लक्षण थाहा पाउनुस्
कार्तिक ४, काठमाडौँ । पानी मानव शरीरका लागि नभइ नहुने पदार्थ मध्य एक हो । दैनिक ४–५ लिटर पानी पिउन चिकित्सकहरुले सुझाव दिए पनि मानिसहरु पानी पिउनेतर्फ त्यति ध्यान दिँदैनन् ।
पानी नपिउँदा शरीरमा विभिन्न किसिमका रोगहरुको संक्रमण देखा पर्छ । आज हामीले शरीरमा पानीको मात्रा कम हुँदा के कस्ता लक्षण देखिन्छन् ? त्यस विषयमा यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं-
कुनै पनि रोग तथा विरामी नभएको बेला टाउको एक्कासी दुख्न थाल्छ भने शरीरमा पानीको मात्रा कम भएको हुनसक्छ । त्यसरी टाउको गह्रौँ भएर दुखेमा तत्काल पानी पिउने र १० मिनेटको फरकमा थोरै केही खाने । त्यसले तत्काल दुखाइ कम हुन्छ ।
केही खानासाथ तत्काल भोक लाग्छ
बढी तिर्खा लाग्दा मानिसको दिमागले भोक लागेको हो कि प्यास लागेको छुट्याउन सक्दैन । त्यसैले भर्खरै खाना खाएको छ भने पनि भोक लागेको जस्तो हुन्छ । यदि कहिले यस्तो भयो भने पानी पिउनुपर्छ । भोक लागेजस्तो हुने समस्या आफैँ हटेर जान्छ ।
धेरै थकान महसुस हुन्छ
जब शरीरमा चाहिनेजति पानीको मात्रा हुँदैन तब शरीरको पूरै प्रणाली नै कमजोर हुन्छ । जसले गर्दा शरीरमा भएको शक्ति नष्ट हुन थाल्छ । यसले तपाईंलाई थाकेको महसुस गराउँछ र उदासीन बनाउँछ ।
काममा ध्यान जाँदैन
दिमागको ७० प्रतिशतभन्दा बढी भाग पानीले बनेको हुन्छ । पानी कम हुँदा दिमाग मन्द हुन्छ । यसले आफ्नो सामान्य काम पनि गर्न मन लाग्दैन र ध्यान पनि जाँदैन ।
छाला सुक्खा हुन्छ
चलिरहेको मौसम विपरीत प्रायः तपाईंको छाला सुक्खा रहन्छ, बारम्बार ओठ फुट्ने हुन्छ भने त्यसको कारण पनि शरीरमा पानीको मात्रा कम हुनु हो । यदि तपाईं नरम र सुन्दर छाला चाहनुहन्छ भने आवश्यकतअनुसार प्रशस्त पानी पिउनुपर्छ ।
पिसाब पहेँलो हुने
तपाईंले पिसाब पहेँलो छ भने पनि शरीरमा पानीको मात्रा कम भएको हो । सामान्य अवस्था भन्दा धेरै पहेँलो हुनु स्वास्थका लागि राम्रो मानिदैन ।
तपाईंलाई एसिडिटी बढेको छ, दिसामा कब्जियत छ, खाना राम्ररी पचिरहेको छैन भने शरीरमा पानीको मात्रा नपुगेर हो । ठीक मात्रामा पानी पिउनाले पाचन प्रक्रिया तन्दुरुस्त हुन्छ र कब्जियत हुन दिँदैन । यसले पेटमा भएको एसिडलाई पनि कमी गराउँछ ।
यदि तपाईंको मुटुको चाल अचानक बढ्यो भने पानीको कमी भएको एउटा संकेत हो ।
चक्कर लाग्ने वा अचानक डराउने
अचानक चक्कर आउने केरै कारण हुन सक्छ, कहिलेकाहीँ दबाइको कारण, निन्द्रा नआउनेलगायतका कारण पनि हुन सक्छ । पानीको कमी यसको प्रमुख कारण हुन सक्छ ।
यदि तपाईंको शरीरमा पानीको कमी भइरहेको छ, शरीरले सही मात्रामा थुक बनाउन पाइरहेको छैन भने मुखबाट नमिठो दुर्गन्ध आउँछ । प्रशस्त थुक नआउँदा मुखमा हानिकारक ब्याक्टेरिया बन्न गई गनाउने श्वास निस्कन्छ ।
मांसपेशी या जोर्नीमा दुखाइ हुन्छ
पानीले मांसपेशीमा वा जोर्नीमा लुब्रिकेन्टको काम गर्ने गर्छ । यसले पानी कम भयो भने दुखाइ बढ्ने सम्भावना हुन्छ ।
मुख सुक्खा हुन्छ
प्रायः मुख सुक्खा हुन्छ भने त्यो पानीको कमी भएको संकेत हो । यस्तो समस्या हुनेले छेउमा सधैँ पानी राख्नुपर्छ र आवश्यकता पर्नेबित्तिकै पिउनुपर्छ । कहिलेकाहीँ कतिपय दबाइ खाँदा पनि मुख सुक्खा हुन्छ ।
कोरोनाका कारण ५५ को मृत्यु , मृतकको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी
Approaches To Understand Phillippines Brides
लमजुङमा पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर दुईको मृत्यु